Miray ara-nofo mandritra ny fadimbolana, manimba ny fahasalamana ve ?
Fraomazy, mofomamy… tandremo, mety hahatonga tohina!
Indraindray zavatra tsy ampoizina akory dia mety hahatonga tohina eo amin’ny olona iray. Ireto omena anao manaraka ireto ireo mila tandremana manokana satria mety hiteraka izany.
Fomba ahitana torimaso haingana
Tranga mety hiseho amin’olona ny tsy fahitana torimaso. Maro karazana ny antony mahatonga an’io : rarintsaina, aretina sns. Ireto ny torohevitra atao hampiharina, hahitana torimaso haingana.
Rehefa inona no mila mijery nono ny vehivavy?
Isan’ny fomba iray hitarafana ny nono, hamantarana raha toa ka misy homamiadana ny « mammographie ». 35 taona, raha aloha indrindra, no tokony hanao azy ny vehivavy.
Tazovony : vodina tamotamo no hanasitranana azy !
Raha ny fitsaboana ady gasy, rehefa miresaka tazovony matetika dia rongony no mby ao an-tsaina, atao vary amin’anana. Raha ny finoana mantsy dia vokatry ny famisaviana, hono, izy io. Misy ihany anefa ireo nahita fomba hafa dia ny fampiasana ny tamotamo.
Tsy fitovian’ny sokajin-drà amin’ny reny sy zaza: maha-afa-jaza na mahatonga « jaunisse »-ny zaza vao teraka.
Isan’ny fototra iray mety hampisy olana ny fitondrana vohoka na tsy hahatomombana azy ny tsy fitovian’ny sokajin-drà na « rhésus » eo amin’ny reny sy ny zaza, na ilay antsoina hoe :« incompatibilité foeto-maternelle ».
Areti-nify, aretin-tenda ..mety hitarika “rhumatisme”!
Aretina tena mitranga amin’izao vanim-potoanan’ny ririnina izao ny « rhumatisme » na ny fanaintainan’ny vanin-taolana. Ireto ny resadresaka miaraka amina mpitsabo, momba an’io aretina io.
“Aphtes” : Rahoviana no tokony hanatona dokotera?
Na olon-dehibe, na ankizikely, dia mety hiseho foana ny “aphtes”. Isan’ny mahatonga azy io ny harerahana, ny rarin-tsaina, ny aretina mitaiza, ny tsy fahampiana fer, ny tsy fahampiana vitamina sns. Ity no tokony hanatonana dokotera, raha misy “aphtes”.
Misy vehivavy sasany, rehefa tonga fadimbolana no tena miakatra ny filàny hiray ara-nofo. Voatery mamehy ny filàny anefa izy irney, satria matahotra sao tsy azo atao ny miray ara-nofo rehefa tonga fadimbolana. Fa tsy atahorana hisy fiantraikany amin’ny fahasalamana tokoa ve ny miray ara-nofo tonga fotoana ?
Tsy misy fiantraikany amin’ny fahasalamana
Tsy dia misy fiantraikany mivantana amin’ny fahasalamana ny fanaovana firaisana ara-nofo amin’ny fotoanan’ny fadimbolana. Ny atahorana kosa dia ny otrikaretina, izay mety hitombo na ho mora tafiditra kokoa any anaty. Mila mitandrina kokoa, noho izany ny mpivady, raha hiray ara-nofo mandritra ny fadimbolana. Isan’ny tsy maintsy atao ny mampiasa fimailo.
Tsy mampitony ny fanaintainana
Misy no milaza fa mampitony ny fanaintainana tsapan’ny vehivavy sasany, rehefa tonga fadimbolana, ny firaisana ara-nofo amin’io fotoana io. Araka ny fikarohana anefa dia tsy misy ifandraisany mihitsy ireo zavatra 2 ireo. Ny sain’ny vehivavy no mahatonga azy hino fa afaka ilay fanaintainana.
Mety maha-bevohoka ny fanaovana firaisana ara-nofo mandritra ny fadimbolana, raha toa ka fohy ny tsingerimbolan’ilay vehivavy, izany hoe : vetivety dia tonga ny fotoana mahalonaka azy. Tsy tokony ho adinoina, noho izany, ny mampiasa fanafody fanabeazana aizana, na dia tonga fotoana aza.
Isaorana ny Dokotera Robert Razafindramanana